ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “စကားလိမ်”
ရယ်လိုက်ရတာ။ ကျွန်မ နဲ့ ဖေဖေလည်း ငယ်ငယ်က အဲဒါမျိုး သိပ်ပြောတယ်။ ငယ်သေးတော့ လူကြီးတွေလို ဖျတ်ခနဲ မပြောနိုင်ခဲ့ပေမယ့်၊ အနိုင်မခံဘဲ မရ ရအောင်ကို ပြောခဲ့တာ။ :D
နာမည်အရင်းရော၊ အဖျားရော စကားလိမ်လုပ်ကြည့်တာ ရီစရာမဖြစ်ဘူး။ တေးသော်။
ဘောလုံးပွဲ အကြည့်ကောင်းနေတာနဲ့ လာဖတ်တာ နောက်ကျနေလို့ ဒီပိုစ့်ကို အခုမှ တွေ့တယ်...
ကိုပေါရဲ့ ခင်မင်မှုကြောင့်သာ ကိုယ့် နာမည် ပြောင်းပြန်ဖြစ်မသွားတာ ကျေးဇူးကြီးလိုက်တာ...
(ဘယ်ရမလဲ...သူများကို နာမည်ဖျက်ရင် နောက်တခါတွေ့ရင် ပြုံးမပြတော့ဘူး... ဟဲဟဲ... သဘောပေါက်...)
ဟိဟိ.. တော်ပါသေးရဲ့ ..တို့ကလွတ်သွားတယ်။ သနားစရာ့ မသက်ဝေ..
ဘယ်လို ပြန်ကြည့်ကြည့် လှနေသေးတဲ့သူ
အသိထဲမှာ မေပုလဲ လို့ နံမည်ပြောင်ပေးထားတဲ့ အာဖရိကန်မလေးတယောက် ရှိတယ်။ ကိုပေါသမီးကို အဲလို နာမည်ပေးပြီး စ ကြည့်ချင်တယ်....
ကျွန်တော် သိပ် မအာရဲတော့ပါဘူး... ခင်ဗျာ။
- အာရေ ခေါ် ဧရာ
>>>Rita..... ဒီတခေါက် ကံကောင်းသွားတယ်မှတ်ပါ.... အေးမြိုမြိုကပ် ရေ။
>>> ခင်ဦးမေ.... မျောက်ပန်းလှန်တာကို ပြောတာလားဟင်။
>>> သက်ဝေ.... ကျေးဇူးအတင်မခံချင်ပါဘူး ရှိုနေမှ။း-)
>>> ပန်ဒိုရာ (arodnap).... ဟုတ်တယ်....အာရွတ်ဒ်နက်ရေ... မသက်ဝေ မကြားစေနဲ့ဗျိုး...
>>> မိုးစက်ပွင့်.... သမီးကို မိုးစက်ပွင့်ရဲ့ ကွန်မင့် ဖတ်ပြတော့ ရီနေတယ်ဗျ။
>>> ကိုဧရာ... ကျီစားတာပါဗျာ။ တကယ်တော့ ရွှေဥဒေါင်းရဲ့ ဖခင်ကြီးနာမည်ကို ပြောင်းပြန်လှန်မှ အဲဒီနာမည်မျိုး ထွက်တာပါ။ ဦးအေရာ...တဲ့။
Thanks for laugh and remember to Mg Tha Cho (Jack_Kwunchangone).
How about WE She Me !
အံမယ် ဒီပို့စ်ကို ခုမှ တွေ့တယ်။ သူများကို ချဉ်သိုး လုပ်ထားတယ်။ လှန်တတ်မှ လှန်ပါ ကိုယ့်လူ။
ငယ်ငယ်က တို့အမအကြီးဆုံးက တို့အော်တိုထဲမှာ ဒီလိုလေး ရေးပေးဖူးတယ်။ မိချို မိုချိ ပိုပါ၏၊ စကားတတ်ပါဘိ တဲ့။
ပြောရင်းဆိုရင်း မမသက်ဝေကို ပြောင်းပြန်လှန်ကြည့်မိပြီ။ Opps!